बिज्ञान प्रबिधि – Ap Nepal
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)ले विशेष गरी मकैलगायत नगदेबालीमा लाग्दै आएको फौजी किराको व्यवस्थापन तथा नियन्त्रणका लागि नयाँ प्रविधिको विकास गरेको छ । नार्कले ग्रिजजस्तो पदार्थलाई मकैको पातमा प्रयोग गरेर फौजी किरा नियन्त्रण गर्न सकिने नयाँ तथ्य पत्ता लगाएको हो । फौजी किराले पछिल्लो करिब चार वर्षदेखि नेपालको अन्नबालीमा क्षति पुर्‍याउँदै आएको छ । सरकारले यसको नियन्त्रणका लागि विभिन्न योजनाहरू ल्याए पनि सफल हुन सकेको छैन । नेपालमा मात्र नभएर विश्वमै चुनौतीका रूपमा देखापरेको फौजी किरा व्यवस्थापनका लागि नार्कका अनुसन्धानकर्ता डा. उज्ज्वल कुशवाहाले पहिलोपटक यस विधिको प्रयोगबारे पत्ता लगाएका हुन् । उनको यस अनुसन्धानलाई लिएर बेलायतको विश्वविख्यात म्यागजिन ‘नेचर जर्नल साइन्टिफिक रिपोेर्टस्को अनलाइन संस्करणमा बिहीबार लेख प्रकाशितसमेत भएको छ । अनुसन्धानकर्ता डा. कुशवाहाका अनुसार किराबाट प्र
काठमाडौँ । सिजी कम्युनिकेसन प्रालीले आजदेखि काठमाडौंँ उपत्यकामा उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा शुरुआत गरेको छ ।यसबाट सार्वजनिक एवम् निजी क्षेत्रबाट प्रवाह हुने सेवाका गुणस्तरमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ । हाल इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीका तुलनामा सिजीको सेवा सस्तो रहेको दाबि समेत गरिएको छ ।कम्पनीद्वारा आज यहाँ जारी विज्ञप्तिमा १२० एमबिपिएस गतिको ‘सिजी नेट’ रु ९९९ मा उपलब्ध हुने जनाइएको छ । कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीले सिजी नेट सेवाले उपभोक्ताका जीवनमा नयाँ अनुभव गराउने बताए । कम्पनीले शुरुआती चरणमा इन्टरनेट सेवा शुरु गरेपनि चाँडैनै आइपिटिभी तथा अन्य सेवा ल्याउने तयारी भएको जनाएको छ ।विज्ञप्तिमा शुरुआती चरणमा काठमाडौँ उपत्यकाका तीनै जिल्लामा उपलब्ध हुने, तत्कालका लागि जावलाखेल, झम्सिखेल, भनिमण्डल र एकान्तकुनामा क्षेत्रमा जडान हुने र एकवर्षभित्र उपत्यकाका सबै क्षेत्रमा सेवा विस्ता
काठमाडौं । चौधरी ग्रुप अन्तर्गतको सीजी टेलिकमले इन्टरनेट सेवा सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । कम्पनीले आक्रामक रुपमा बजारमा उपस्थिति जनाउने उद्देश्यका साथ आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको कार्य अगाडि बढाएको हो । कम्पनीले इन्टरनेट सेवा सञ्चालनका लागि काठमाडौंको सतुंगलमा डेटा सेन्टर समेत बनाइरहेको छ । कम्पनी स्रोतका अनुसार उक्त डेटा सेन्टर निर्माणको काम करिब २५ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ । अबको पाँच/छ महिनामा सतुंगल लगायतका केही स्थानमा कम्पनीले फाइबर इन्टरनेट सञ्चालनमा ल्याउने गरी आवश्यक पूर्वाधार तयार भइसक्नेछ । यस बाहेक कम्पनीले प्वाइन्ट टु प्वाइन्ट फाइबर कनेक्सन, ओएलटी (अप्टिकल लाइन टर्मिनल), राउटर लगायतका आवश्यक उपकरण तथा सामग्री समेत खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । मोबाइल तथा आधारभूत दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनका लागि युनिफाइड लाइसेन्स पाउन नसकेको सीजी तत्काल इन्टरनेट सेवामा केन्द्रीत भएको
नेपालमा यस्ता मोबाइलहरू आउँदो जेठदेखि नचल्ने
काठमाडौं- आउँदो जेठ महिनाबाट नेपालमा अ’वैध मोबाइल नचल्ने भएका छन् । त्यसका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल डि’भाइस म्या’नेजमेन्ट सिस्टम–एमडीएमएस जडानको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । प्राधिकरण स्थापनाको २३ वर्ष पुगेको अवसरमा बिहिबार आयोजितका कार्यक्रममा बोल्दै प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले एमडीएमएस जडान प्रक्रियाको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी गराएका हुन् । उनले एमडीएमएस जडान, इ’न्स्टलेसन र स्थापनाको कार्य अगाडि बढिसकेको र अबको जेठबाट नेपालमा अ’वैध रुपमा भित्रिने मोबाइल नचल्ने बताए । प्राधिकरणले अ’वैध रूपमा भित्रिएका मोबाइल ब’न्द गराउन विगत साढे चार वर्षदेखी इन्टरनेसनल मोबाइल इ’क्विपमेन्ट आ’इडेन्टिटी (आईएमईआई) नम्बर दर्ता गराउने काम गर्दै आएको छ ।पहिलो चरणमा मोबाइलको आईएमईआई दर्तालाई प्राथामिकता दिएको प्राधिकरणले अब दर्ता नभएको मोबाइल ब’न्द गर्ने कार्य केही
काठमाडौं । डिशहोम फाइबरनेटका प्रयोगकर्ताले अब नि:शुल्क रुपमा डिशहोम टिभी हेर्न पाउने भएका छन् । त्यसका लागि कम्पनीले ‘डिशहोम फाइबरनेट’ मा ‘एकदाम दुईकाम’ अफर सञ्चालनमा आएको छ । जसअन्तर्गत डिशहोम फाइबरनेट जडान गर्दा डिशहोम टिभीको मासिक शुल्क नलाग्ने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार फाइबर इन्टरनेट सेवा हाल भैंसेपाटी, बुङमती, नयाँ बानेश्वर, तिनकुने, चाबहिल, कपन, बौद्ध, जोरपाटी, बुढानिलकण्ठलगायत काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा उपलब्ध भइरहेको छ । निःशुल्क जडान गरिने डिशहोम फाइबरनेट ३ महिना, ६ महिना र १२ महिना गरी विभिन्न प्याकेज उपलब्ध रहेको छ । कम्पनीका अनुसार वार्षिक भुक्तानी गर्दा ड्रपवायर समेत निःशुल्क रहेको छ । फाइबर नेट सेवा लिनका लागि उपभोक्ताले नजिकको डिशहोम डिलर दाइलाई सम्पर्क गरी अथवा ९८०१५४४००० मा सम्पर्क गरी सेवा लिन सकिनेछ । विगत एक दशकभन्दा बढी समयदेखि डीटीएच सेवा प्
वास्तु शास्त्रः यी पाँच दो,ष, जसले घरमा निम्त्या’उँछन् गरिबी र अ’शान्ती